CheteOffice 7: nhau nezve iyo nyowani vhezheni yehofisi suite | Linux Addicts
CheteOffice 7: nhau nezve iyo nyowani vhezheni yehofisi suite
Isaac | | Noticias, Zvirongwa
CheteOffice 7.0 yatosvika, iyo itsva vhezheni yeiyi hofisi suite yakavhurika sosi inogona kuve yakanaka imwe nzira kuMicrosoft Office, pamwe neLibreOffice, OpenOffice, Calligra, nezvimwe. Muchokwadi, zvishoma nezvishoma iri kuramba ichiwedzera kufarirwa nekuda kwemaitiro ayo, ichigadzirwa sechinotsiva Google Docs.
Kana iwe usingazive CheteOffice parizvino, iwe unofanirwa kuziva kuti yakakamurwa kuita maviri akasiyana editions. Kune rimwe divi ndiko Chete Office Docs, inova iyo inosanganisira yese sevha software yekumisikidza online office suite senge Google Docs. Imwe yacho OnlyOffice Docs DE, iyo inosanganisira maapplications akafanana, asi edesktop, muchimiro cheLibreOffice, kunyangwe paine mukana wekubatanidza kune online zviitiko.
1 Chii Chitsva muCheteOffice Docs 7.0
Chii Chitsva muCheteOffice Docs 7.0
Pakati pezvinhu zvitsva zvakaverengerwa mukati Chete Office Docs 7.0 zvinotevera zvimire pachena:
Nyowani mafomu sisitimu yekukurumidza kugadzira mafomu ekutora, mibvunzo yemibvunzo, zvibvumirano, zvibvumirano zvepamutemo, nezvimwe.
Kuwedzerwa kwekudzivirira password yemabhuku ebasa uye maspredishiti.
Tsigiro yematafura ekutarisa ekuita nawo akasanganiswa data kuongororwa uye kushuma.
Zvimwe zvitsva zvekugadzirisa zvinyorwa, senge autocorrect hyperlink, kana mail merge.
Iwe uchawana zvimwe zvekushandisa zvekuratidzira, senge shanduko nyowani uye animation yekutamba yakawedzerwa kune iripo.
Nhoroondo yeshanduro itsva yespredishiti kuti usarasikirwe neruzivo nezvakagadziridzwa.
Sarudzo nyowani yekugadzirisa makomendi otomatiki.
Rima modhi yeizwi processor.
Maitiro matsva ekuona ekuongorora zvinyorwa zvemavara.
Kugadziriswa kwezvikanganiso maererano neshanduro dzakapfuura.
Munyaya ye Chete Office Docs DE 7.0, nhau idzi:
Inogovera akawanda ezvinyowani zvakaunzwa muCheteOffice Docs 7.0.
Uye inowedzera zvayo zvitsva zvakadai se:
Sarudzo nyowani dzekubatanidza maakaundi nekDrive uye Liferay kuti ushande nemagwaro epamhepo (sezvazvakaita neCloud, Nextcloud uye Seafile).
Sarudzo yekuvhura akasiyana edhita esuite muhwindo nyowani pane kungove mumatabu sepakutanga.
Dzimwe sarudzo dzekuyera kuwedzera interface saizi kusvika ku500%.
Yakawedzera tsigiro yenzvimbo nemitauro mitsva.
La Dhawunirodha chete Office Docs 7.0 inowanikwa kune akasiyana masisitimu anoshanda, akadai seWindows, macOS, uye kunyange nharembozha, pamwe nemifananidzo yeDocker, uye mapakeji eGNU/Linux kugoverwa seDebian, Ubuntu uye zvinobva, CentOS/RHEL uye zvinobva, nezvimwe, zvese. mumapakeji RPM, DEB, pamwe nemapakeji epasirese seAppImage, FlatPak, uye Snap.
Dhawunirodha OnlyOffice - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » CheteOffice 7: nhau nezve iyo nyowani vhezheni yehofisi suite
VirusTotal uye SafeBreach kesi: Chokwadi chose uye hapana asi chokwadi
SUSE inozivisa kutsiva kweCentOS uye inonzi Liberty Linux